Ziziphi izindlela ezisebenzayo zokuhambisa isayithi lakho kuma-backlink?
Uma uzibuza ukuthi isakhiwo sokuxhumanisa sisaphila noma cha, lesi sihloko sizokunikeza impendulo ecacile yalo mbuzo.
Singakusho ngokuqiniseka ukuthi isakhiwo sokuxhumanisa sinomthelela omkhulu kwizinga eliphezulu kanye negunya lomkhiqizo. Izixhumanisi ezingenayo zisetshenziselwa izinjini zokusesha ukuthola ukuthi umthombo wewebhu ufanele kangakanani kumagama angukhiye awakhona.
Eqinisweni, ukwakheka kokuxhumana okungavamile kungabhekwa njengokufa. I-Google iyakhathalela kakhulu ngekhwalithi yezixhumanisi ezingenayo futhi ithola zonke izikimu zokwakha izixhumanisi ze-spammy. Izixhumanisi ezingezona ezemvelo azikwazi ukwenza umsebenzi wosuku nanoma yibaphi abaphathi bewebhu abaqeqeshiwe, abanomthwalo wemvelo yokukhiqiza izitifiketi ze-website. Namuhla, inani lezixhumanisi zakho alilutho. Ngemuva kokubuyekezwa kokugcina kwe-Google ngo-2012, konke okungekho emuva kokudala emuva kwe-backlink kudinga ukuba ku-deindexed.
Yingakho kulesi sihloko sizokhuluma kuphela ngesakhiwo sokuxhumanisa esihleliwe esasenzuzo ngo-2017. Okuqukethwe kwekhwalithi kuholela ekuqaliseni imiphumela yokuhlanganiswa kwemvelo. Yonke imizamo yakho izovuzwa ngezinga eliphakeme ekhasini lekhasi lokusesha. Uma ungathanda ukuthola ukuhamba kwezimpawu ezihamba phambili eziphilayo, udinga ukwakha izinhlobo ezahlukene ezahlukahlukene ezizimele ezizimele, eziphezulu.
Ukuphakamisa igunya lakho lesizinda, udinga ukwakha izixhumanisi emithonjeni ephezulu ye-PR yemithombo ye-Google eyabaluleka kakhulu yi-Google. Njengomthetho, kubonakala kunzima ukudala izixhumanisi kwimithombo yewebhu enjalo uma unamabhizinisi amancane noma amasha. Noma kunjalo, kusengenzeka, futhi ngizokutshela ukuthi kungani. Vele ulandele amaqhinga wokwakha okuxhumanisa ngezansi, futhi uzoqala ukubona ukwanda kwethrafikhi.
Indlela yokuhambisa isayithi lakho nge-backlink?
Yiba ngumsebenzisi osebenzayo ku-Quora
Quora ngumthombo wewebhu wezemfundo ophelele ohloselwe ukusiza abasebenzisi ukuxazulula izinkinga zabo. Kumahhala futhi sivulekile isiteji sesethameli esikhulu esinikeza izinzuzo kubasebenzisi nabasunguli bewebhu. Konke okudingeka ukwenze ukucinga amagama angukhiye ahlobene niche yakho yemakethe. Ngenxa yalokho, uzothola amakhulu ezinkulungwane angaphenduli imibuzo. Bese ubuyela ezindabeni lapho uzizwa uchwepheshe khona, futhi uma kukhona ucingo oluthile lokuxhumana ngaphakathi kwesayithi lakho elingasiza ekunikezeni ulwazi oluningi ngesihloko, faka isixhumanisi kuso.
Yiba usizo ku-HARO
Omunye umthombo we-PR ophezulu lapho ungakha khona izixhumanisi ze-organic kanye nezemfanelo yi-HARO (ukusiza intatheli). Kuyinto yesikhulumi lapho intatheli ehamba khona lapho bedinga usizo. Bashicilela imibuzo yabo, futhi uma ungabanikeza impendulo efanele futhi ewusizo, uthola ithuba lokuthola umshini wokukhululeka. Uhlelo lokuhlola imibuzo efanele lusebenza ngokufanayo naku-Quora. Udinga ukuqhuba usesho ngamagama akho okucinga okuhloswe futhi uphendule kuphela leyo mibuzo lapho uzizwa ukhona khona. Uma intatheli ithola ikhwalithi yakho yokwenza impendulo, uyayishicilela kwiwebhusayithi yezindaba noma umagazini onjengeForbes, Search Engine Journal noma Entrepreneur. Ngenxa yalokho, uzothola ujusi wokuxhumanisa wekhwalithi nokugeleza kwemgwaqo okuhlosiwe. Yiqiniso ngeke uthole ithoni yezixhumanisi kusuka kulezi zindawo zamapulatifomu, kodwa ngokuqinisekile, izothuthukisa iphrofayli yakho yokuxhumanisa Source .